११ खेलाडीले नै पेनाल्टी हान्दा पनि खेल बराबर ! अँध्यारो भएर बल नदेखिएपछि खेल स्थगित !
माघ २७, २०७५ Bigul Media | STT
काठमाडौं – बुढासुब्बा गोल्डकप २०७५ को उद्घाटन खेल अँध्यारो परेपछि स्थगित भएको छ । सीएमजी क्लब संकटा र मेची नेत्रालय काक्करभीट्टा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टरबीचको खेल टाइब्रेकरमा पुगेर दुवै टोलीका ११ खेलाडीले टाइब्रेकर लिँदा पनि नतिजा ननिस्केपछि स्थगित भएको हो । निर्धारित समयको खेल २-२ को बराबरीमा सकिएपछि खेल टाइब्रेकरमा धकेलिएको थियो ।
काक्करभीट्टाले खेलको १० औं मिनेटमा कर्ण लिम्बूको गोलमा अग्रता लिएको थियो । कर्णले पेनाल्टी क्षेत्रभन्दा थोरै बाहिरबाट प्राप्त फ्रिकिकलाई गोलमा परिणत गरेका थिए ।
दोस्रो हाफको ६० औं मिनेटमा संकटाले बराबरी गोल फर्कायो । सेड्रिक अबाको पासमा जय गुरुङले गोल गरेका थिए । खेलको ६८ औं मिनेट काक्करभीट्टाले पुन: अग्रता लियो । संकटाका गोलरक्षक राजबाबु थापाले कर्नरमा नियन्त्रण लिन नसकेको बलमा पुजन उपरकोटिले हेडर गोल गर्दै अगाडी बढाए ।
दोस्रो हाफको इन्ज्युरी समयको दोस्रो मिनेटमा संकटाले बराबरी गोल फर्कायो । दिपेश आले मगरले पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट गोल गर्दै खेललाई टाइब्रेकरतर्फ धकेलेका थिए ।
टाइब्रेकरमा दुवै टोलीले जित दर्ता गर्न सकेनन् । पहिलो पाँच पेनाल्टी ४-४ को अवस्थामा सकिंदा सडन डेथमा दुवै टोलीले १-१ प्रहार चुकाए । ९-९ को स्थितमा छँदा दुवै तर्फका खेलाडीले बल देख्न नसक्ने जनाएपछि खेल स्थगित भएको हो । सोमबार खेल यसै स्थितिबाट सुरु हुने जानकारी आयोजकले दिएको छ ।
प्रकाशित : आइतबार, माघ २७, २०७५१२:३७
म्यानमारविरुद्ध नेपालले परिवर्तन गरेन, रेनुका नै कप्तान !